Maitiro ekuronga F akateedzana kiyi yemota
Iye zvino iyo nyowani BMW F yakateedzana ine maviri masystem: CAS4 uye FEM / BDC system. Maitiro maviri eCAS4 anti-kuba chirongwa. Iyo programmer yekuparadzanisa scheme yakatorwa neCAS4 mumakore ekutanga yakashandiswa uye ichiri kufarirwa nevazhinji masters. Iyo programmer inotsemuka iyo chip kuburikidza neiyo yepamusoro-frequency inopera ...
Nongedzo kune tekinoroji yekiyi yemotokari
Semazuva ese, mota dzese parizvino dzinoshandisa nzira imwechete yekutanga-kutenderedza magetsi ne switch switch kuti utange mota uyezve injini. Nekudaro, iyo nzira yekudzora switch yacho yakasiyana zvichienderana nemhando yemota. Vazhinji vavo vanoshandisa nzira yechinyakare yekuisa iyo kiyi, whi ...
Maitiro ekugadzirisa nekiyi kiyi kutadza
Nekuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji, iwo marongero akagadzirwa nevanhu akatibatsira kuponesa dambudziko rakawanda, iro rinogona kuoneka kubva kukiyi iri kure yemota. Makiyi ekutanga emotokari akangoita sekiyi dzeimba yedu. Mukova wemotokari unoda kuvhurwa nekupinza kiyi yechimakanika muchiuno chekiyi ....
kiyi yemota inoshanda sei
Chinyorwa chekutanga: kushanda musimboti wemota kiyi chip Pakati pemazhinji mafashoni emagetsi zvigadzirwa mumotokari, iyo smart kiyi system inokwezva maziso. Iyo isina kiyi yekupinda tekinoroji inounza yakanakira nyore, uye iyo-kiyi kutanga inounza izere yakazara tekinoroji, asi Inodhura zvakanyanya kubva kutendeuka th ...
Nzira yekugadzirisa KweTiguan mita inoratidza "kiyi haina kuwanikwa"
Mota yaive yakamiswa mugaraji uye nei isingakwanise kutanga mangwana acho? Zvisinei, panguva ino dashibhodhi hariratidzi "anti-kuba system yakaitwa", asi "kiyi haina kuwanikwa", kiyi iri kure yakajairika, asi haigoni kuwana mota! Dambudziko nderei? Mushure mekunyatsoongorora, ...
Nzira yekubvisa Anti-kuba kweiyo 4 vhezheni, 5 vhezheni yeTiguan, Touareg, Q5, GOLF, Magotan
Volkswagen neAudi 4th uye yechishanu chizvarwa chinopesana nekubiwa kukanzura chaisanganisira akawanda mamodheru, anosanganisira Volkswagen CC, Magotan, Sagitar, Passat, Tiguan, Touareg 3.6L, Gorofu 6, Sharan, Audi Q5, A4L, mamwe A6L, zvichingodaro. Ivo vanogona kukanzura iyo inorwisa kuba, sekushandiswa kweBosch MED17.X, MEV17.X, ECD17.X serie ...
Ungaita sei kana mukova wakakiiwa mumota?
Hupenyu hwevanhu marongero ari kuramba achivandudza, saka hupenyu Rhythm inomhanyisa. Mune ino kesi, vamwe vanhu vanozove vane husimbe, uye ivo vanowanzo siya zvikwama zvavo kana zvinhu kumba pavanobuda. Hazvina basa kana iwe wakanganwa izvi zvidiki zvinhu, asi kana iwe ukakiya kiyi yemota mukati ...
Ndekupi kwaunogona kutora iyo yekutsiva mota kiyi？
Ungaita sei kana iwe ukarasa kiyi yemota? Varidzi vemotokari vazhinji vanonetsekana nematambudziko aya. Pakasvitswa mota nyowani, paive nemakiyi maviri. Yakarasika imwe ichine kiyi yekusiya, asi ko zvekuita kana kiyi yekusevha ikarasika futi? Ipapo iwe unofanirwa kuenzanisa makiyi. Nhasi ini ndichakuudza maitiro ekufananidza neiri kure ...
Iko kushanduka kwebhanga repakati mabhiri: onshore nhoroondo ongororo uye ekumahombekombe maitiro ekudzoka | Pevanhu Bhangi reChina_Sina Mari_Sina.com
Svosve Boka rasvika! Gumiguru 29! Vhura account izvozvi uye gadzirira kutenga! [Pinda mumotokari nekukurumidza kuti uve mugovani uye unakirwe nebhenefiti yekuvhura account! Central Bhanga repakati bhangi chikwereti chenguva pfupi chakapihwa nePeople's Bank yekuChina, icho chinonyoreswa nemabhangi ezvokutengeserana ne ...
Bata chigaro chekugadzirisa Gadzira Kiyi nyowani Kana ukasarudza kushongedza chiteshi chekugadzirisa nekiyi nyowani, saka unofanirwa kupa mota uye ID yemuridzi. Zvinoenderana nemamodheru akasiyana, chiteshi chekugadzirisa chinoda kuti muridzi wacho ape password-yekumisikidza yekuba kiyi-manhamba gumi nemanomwe. T ...
Mota kiyi ine ina yakavanzwa basa, inogona kuponesa hupenyu mune emergency nguva
Ingovhura musuwo wekombi Mota zhinji inongogona kuvhura chete iyo kombi yemota kana iwe uchidzvanya kiyi yekure, uye kana uchinge wadzvanya kaviri, mikova yese inogona kuvhurwa. Vamwe vatyairi vanotora mota munzvimbo yekumisa yekure, Kana ukangovhura musuwo wekombi, vanogona kudzivirira vakaipa kuti vasakwira pamotokari uko ...
Maitiro ekuodha Nyoresa account neemail yako - Pinda - Wedzera chinhu neuwandu kungoro - Tumira (tarisa) - Sarudza mutengesi Sevhisi yedu 1.Tinopa akawanda akasiyana makiyi emota, transponder machipisi, makiyi programmers, locksmith maturusi nezvimwewo 2.Chero kubvunza kuchapindurwa w ...